धादिङको चुनावी माहोल दुई नम्बर क्षेत्रमा | चितवन पोष्ट
गृह » धादिङको चुनावी माहोल दुई नम्बर क्षेत्रमा
धादिङ । पहिलो चरणमा हुन गइरहेको प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाका ३७–७४ सिटमध्ये धादिङ जिल्लामा दुई प्रतिनिधिसभा तथा ४ प्रदेशसभाका गरी ६ जना चुनिँदै छन् । जिल्लामा यो निर्वाचनमा दुई लाख ३३ हजार ५०५ जना मतदाताले मत दिन पाउने छन् ।
धादिङ जिल्ला पछिल्लो समय एमालेको लालकिल्ला भनेर चर्चा हुने गरेको छ । पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनमा साविकका ३ वटै क्षेत्रमा माओवादीले जितेको यस जिल्लामा दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा ३ वटै क्षेत्रमा एमालेका प्रतिनिधिहरुले जितेका थिए । गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा समेत दुई नगरपालिका र ११ गाउँपालिका रहेको यस जिल्लामा एक नगरपालिका र दुई गाउँपालिकामा कांग्रेसको नेतृत्व रहेको थियो भने माओवादी र राप्रपाले १÷१ गाउँपालिकामा नेतृत्व जितेका थिए । बाँकी ८ वटा स्थानीय तहमा नेकपा एमालेले नै जित हासिल गरेको थियो ।
स्थानीय चुनावमा एमालेले एक्लै चुनाव लडेको थियो भने अन्य पार्टीले जितेका ५ मध्ये पनि ३ वटामा कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन रहेको थियो । स्थानीय निर्वाचनको आँकडाअनुसार हेर्दा धादिङ जिल्लामा वाम गठबन्धनको कुल मत एक लाख ६ हजार बढी छ भने राप्रपासहितको कांग्रेसको मत ६३ हजार हाराहारीमा छ । स्थानीय चुनावमा एउटै मोर्चामा रहेका कांग्रेस र माओवादी अहिले दुईतिर रहेकाले धादिङको चुनावी माहोल झनै रोचक बन्दै गइरहेको छ ।
जिल्लाका २ वटै प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा ४ वटै प्रदेशसभा सदस्यमा वाम गठबन्धनको पकड रहने वाम घटकको दाबी भने छ, तर लोकतान्त्रिक गठबन्धनले आफूहरु पनि बलियो भएर अघि बढेकाले लालकिल्ला भत्किने बताएको छ । धादिङ जिल्लाको दक्षिणी क्षेत्र अर्थात् हालको क्षेत्र नम्बर १ मा नेपाली कांग्रेस निकै कमजोर मानिन्छ । दुई संविधानसभाको निर्वाचनमा तेस्रो पार्टी बन्न पुगेको साविकको क्षेत्र नं ३ मा साविकको क्षेत्र नं २ का ६ वटा गाविस थपेर हालको क्षेत्र नं १ कायम गरिएको छ । थपिएका ६ गाविसहरु पनि एमालेकै पकड क्षेत्र रहेकाले धादिङको क्षेत्र नम्बर १ मा वाम गठबन्धनका उम्मेदवारहरुले विपक्षीसँग भारी मतान्तरले चुनाव जित्ने अनुमान गरिएको छ । वाम गठबन्धनबाट धादिङ क्षेत्र नम्बर १ का लागि प्रतिनिधिसभातर्फ नेकपा एमालेका जिल्ला अध्यक्षसमेत रहेका भूमिप्रसाद त्रिपाठी उम्मेदवार रहेका छन् भने प्रदेशसभातर्फ एमाले पोलिटब्युरो सदस्यसमेत रहेका राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे तथा माओवादी केन्द्रका मजदुर नेता शालिकराम जमरकट्टेल उम्मेदवार रहेका छन् ।
राप्रपाको समर्थनमा नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट प्रतिनिधिसभातर्फ विश्व अर्याल तथा प्रदेशसभातर्फ मदुुकुमार श्रेष्ठ र प्रभातकिरण सुवेदी प्रतिस्पर्धामा छन् । यो क्षेत्रमा राप्रपा निकै कमजोर अवस्थामा रहेको छ ।
क्षेत्र नम्बर १ मा वाम गठबन्धनका उम्मेदवार निकै बलियो देखिए पनि क्षेत्र नम्बर २ मा भने प्रतिस्पर्धा निकै रोचक रहेको छ । क्षेत्र नम्बर २ मा प्रतिनिधिसभातर्फ एमालेका केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका खेमप्रसाद लोहनी तथा नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट वर्तमान सरकारका कानुन राज्यमन्त्रीसमेत रहेका दिलमान पाख्रिन प्रतिस्पर्धामा छन् । यस्तै, जिल्ला सदरमुकाम समेटिएको प्रदेशतर्फ नेकपा एमालेका तर्फबाट डाक्टर रामकुमार अधिकारी तथा नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट रमेश धमला प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका छन् । डा. अधिकारी एमालेका राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषद्का पूर्वसदस्य हुन् भने धमला नेपाली कांग्रेसका जिल्ला सभापति हुन् । उत्तरी भेगको पहाडी क्षेत्र समेटिएको दोस्रो प्रदेशमा भने वाम गठबन्धनका तर्फबाट माओवादीका मजदुर नेता जगत सिम्खडा तथा लोकतान्त्रिक समूहका तर्फबाट राप्रपाका डम्बर तामाङ उम्मेदवार बनेका छन् । तामाङ राप्रपाका नेता एवम पूर्वगृहमन्त्री बुद्धिमान तामाङका भाइ हुन् ।
साविकको क्षेत्र नम्बर २ बाट २०५६ सालको संसदीय निर्वाचनमा कांग्रेसका रामनाथ अधिकारी निर्वाचित भएबाहेक नेपाली कांग्रेसले प्रत्यक्ष सांसद् पाउन सकेको छैन । अहिलेको आमनिर्वाचनमा वाम गठबन्धन नै बनेकाले कांग्रेस उम्मेदवारलाई वाम गढ तोड्नु फलामको चिउरा चपाउनुजस्तै गाह्रो छ ।
अघिल्लो संविधानसभाको निर्वाचनमा भन्दा अहिलेको निर्वाचनमा निर्वाचन क्षेत्रमा निकै फेरबदल भएको छ भने साविकको क्षेत्र नम्बर २ बाट एमालेको एकलौटी पकड क्षेत्र मानिएको कुम्पुर, कल्लेरी, केवलपुर, गोगनपानी, नलाङ र सलाङ हालको क्षेत्र नम्बर १ मा गाभिएकाले बाँकी क्षेत्रमा नेपाली कांग्रेसकै पकड बलियो रहेको देखिन्छ र यसले नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवारलाई केही सहज हुने लोकतान्त्रिक समूहको दाबी छ ।
धादिङ क्षेत्र नम्बर २ बाट वाम गठबन्धनका उम्मेदवारका रुपमा ब्राह्मण समुदायका खेमप्रसाद लोहनी तथा तामाङ समुदायका दिलमान पाख्रिन प्रतिस्पर्धामा छन् । खासगरी, व्राह्मण तथा क्षेत्री समुदायका जनताहरुले साम्प्रदायिकताका आधारमा मत नदिने तर तामाङ समुदायमा त्यस्तो मान्यता बढी रहने भएकाले तामाङ समुदायको एकछत्र बासस्थान रहेको उत्तरी क्षेत्रमा पर्ने सेर्तुङ, तिप्लिङ, लापा, झार्लाङ, रि, दार्खा, सत्यदेवी, सेमजोङजस्ता गाविसको मत कांग्रेस उम्मेदवार पाख्रिनले पाउने सम्भावना रहेकाले पनि वाम उम्मेदवार लोहनीलाई भन्दा लोकतान्त्रिक समूहका दिलमान पाख्रिनलाई चुनाव जित्न सजिलो हुने नेपाली कांग्रेसका उपाध्यक्ष भक्त लामा बताउँछन् ।
दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसको टिकट वितरणमा देखिएको चरम विवाद र त्यसले सिर्जना गराएको बागी समस्याका कारण क्षेत्र नम्बर १ मा कांग्रेसले सिट गुमाएको थियो । उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन हुँदासम्म स्थानीय नेता फणीकान्त छत्कुलीलाई टिकट दिइएकोमा एकाएक तिलक रूवालीका नाममा टिकट सरेपछि छत्कुलीले खुलेरै कांग्रेसलाई असहयोग गरेका थिए र सोही कारण एमालेका धनबहादुर घलेले सांसद् बन्ने मौका पाएका थिए ।
प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र नं २ मा लोकतान्त्रिक गठबन्धनले नेपाली कांग्रेसका कानुन न्याय तथा संसदीय व्यवस्था राज्यमन्त्री दिलमान पाख्रिनलाई अघि सारेको छ । पाख्रिनको प्रतिस्पर्धा वाम गठबन्धनबाट एमालेका केन्द्रीय सदस्य लोहनीसँग हुनेछ । पाख्रिन कांग्रेसका पुराना नेता दामन पाख्रिनका छोरा हुन् । देउवानिकट मानिएका दिलमान जनजाति कोटाबाट समेत टिकट लिनका लागि योग्य भएपछि प्रतिनिधिसभाको टिकट दौडबाट कांग्रेस धादिङका सभापति रमेश धमला बाहिरिएका थिए ।
लोहनी जिल्ला विकास समिति धादिङका सभापतिसमेत भइसकेका व्यक्ति हुन् । सभापति हँुदा विकासप्रेमी नेता भनिएर चिनिएका लोहनी एमाले धादिङको अध्यक्ष हुँदै केन्द्रीय सदस्य भएका हुन् । अध्ययनमा तीक्ष्ण मानिएका लोहनी युवाहरुसँग मात्र नभई सबै क्षेत्रका व्यक्तिसँग समान सम्बन्ध कायम राख्न खप्पिस मानिन्छन् । प्रतिनिधिसभा २ मा लोकतान्त्रिक गठबन्धन तीन हजार २५४ मतले अगाडि छ । यस क्षेत्रमा लोकतान्त्रिक गठबन्धनले ३४ हजार एक सय ५६ मत ल्याएका थिए भने वाम गठबन्धनले ३० हजार ९०२ मत प्राप्त गरेका थिए । यस क्षेत्रमा दुई गठबन्धनबीच कडा प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ ।
प्रदेश २ को ‘क’ मा कांग्रेसबाट जिल्ला अध्यक्ष रमेश धमला र एमालेबाट डा. रामकुमार अधिकारी उम्मेदवार छन् । धमला र अधिकारी दुवै पहिलोपटक चुनावमा होमिएका हुन् । धमला नेपाली कांग्रेसका जिल्ला सभापति हुन् । उनी युवाहरुका माझमा लोकप्रिय छन् । स्थानीय निर्वाचनमा यस क्षेत्रमा पर्ने नीलकण्ठ नगरपालिका र ज्वालामुखीको प्रमुखमा कांग्रेसले जितेको थियो भने नेत्रावती गाउँपालिकामा एमालेले जित हासिल गरेको थियो । यस क्षेत्रका दुवै प्रतिस्पर्धीले आफूले दोब्बर मत ल्याएर जित्ने दाबी गरेका छन् ।
यस क्षेत्रमा लोकतान्त्रिक गठबन्धन पाँच हजार ५५८ मतले अगाडि छ । लोकतान्त्रिक गठबन्धनले २१ हजार ६३४ मत प्राप्त गरेका थिए भने वाम गठबन्धनले १६ हजार ७६ मत पाएको थियो ।
प्रदेश २ को ‘ख’ मा माओवादी केन्द्रबाट जगत सिम्खडा र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट डम्बर तामाङ चुनावी मैदानमा छन् । सिम्खडा माओवादी केन्द्रका मजदुर फाँटका युवानेता हुन् । उनी मजदुर क्षेत्रमा लामो समय काम गरी माओवादी केन्द्रको पोलिटब्युरो सदस्यसमेत बनेका छन् । तामाङ भने राजनीतिमा नयाँ अनुहार हुन् । जिल्लामा खासै लोकप्रिय रुपमा नचिनिएका तामाङ राप्रपाका नेता एवम् पूर्वमन्त्री बुद्धिमान तामाङका भाइ हुन् । यस क्षेत्रमा वाम गठबन्धन दुई हजार तीन सय २३ मतले अगाडि छ । यस क्षेत्रमा वाम गठबन्धनले १४ हजार ८२६ मत पाएको थियो भने लोकतान्त्रिक गठबन्धनले १२ हजार ५०३ प्राप्त गरेको थियो । स्थानीय तहको निर्वाचनमा एक्लै उठेर रूवीभ्याली गाउँपालिकाको प्रमुखमा विजयी भएको राप्रपाको समर्थन अहिलेको चुनावमा नेपाली कांग्रेसका पाख्रिनलाई रहेको छ ।
गत वैशाख ३१ गते सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा १३ स्थानीय तहमध्ये ८ वटा एमाले, तीन नेपाली कांग्रेस, एक माओवादी केन्द्र र १ वटा राप्रपाले जितेको थियो । गत स्थानीय निर्वाचनमा नेकपा एमाले र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्र्टी एकल चुनावी प्रतिस्पर्धामा थिए भने अधिकांश स्थानमा नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले कार्यगत एकता गरेका थिए । २०६४ र ०७० को संविधानसभा निर्वाचनमा राजेन्द्र पाण्डेसँग पराजित जमरकट्टेल उनै पाण्डेसँग सहकार्य गरेर प्रदेशसभाका लागि उठेका छन् ।